ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ (ဂျာမနီ) အသင်း: October 2012
ကထိန်လျာ သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ နှင့် အလှူငွေ လှူဒါန်းပွဲ
ဂျာမဏီနိုင်ငံ၊ ဖရန့်ဖို့မြို့၊ ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်တွင် သီတင်းသုံးတော်မူသည့် ဆရာတော်နှင့် ပင့်သံဃာတော် အရှင်မြတ် (၅) ပါးတို့အား ကထိန်လျာသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ နှင့် ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲတို့ကို ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် အသင်းမိသားစုများ ကြွရောက်ကြည်ညို ကုသိုလ်ယူကြပါရန် ခင်မင်သော စိတ်ထား ဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ဆရာတော်များနှင့် သင့်လျှော်မည့် အသုံးအဆောင်များကိုလည်း မိမိတို့ အစီအစဉ်ဖြင့် လှူဒါန်းပူဇော်နိုင်ကြ ပါသည်။
အလှူရှင် ဒေါက်တာ အေးနိုင် + ဒေါ်သန်းသန်းချို မိသားစု၊ ဒေါ်ခင်သန်းနွယ် (ဒေါ်နွယ်) သား - ကိုဇင် မိသားစု၊ ဦးကြည်ဝင်း + ဒေါ်လင်းလင်းလက် (မငယ်) မိသားစု တို့မှ ဆရာတော် သံဃာတော်များနှင့် ဧည့်ပရိသတ် များအား ဆွမ်းခဲဖွယ် ဘောဇဉ်များဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျင်းပမည့်နေရက်။ ။ ၀၄. ၁၁. ၂၀၁၂ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့
ကျင်းပမည့်အချိ်န် ။ ။ နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၄း၀၀ နာရီအထိ
ကျင်းပမည့်နေရာ ။ ။ Saalbau Bornheim
Arnsburger Str 24,
မွေးနေပွဲ အမှတ်တရမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ အပိုင်း(၂)
မွေးနေ့ရှင် ဦးဇင်း မွေးနေ့ကိတ်လှီးနေပုံ
အမြဲတမ်း တက်တက်ကြွကြွ ကိုစိုးဝင်းသန်း
သာသနရံသီ၏ စူပါ အဖွဲ့
စန္ဒာ ကတော့ရိုးရာမပျက် ပါခင်ဗျာ့
ကိုဇော် ဦးဇင်း နဲ့ဘာညှိနေလဲမသိဘူး
ကိုအောင်ကြီး မှ အလျှုငွေ အားလုံးကိုဆက်ကပ်နေပုံ
မွေးနေ့ကိတ်အလျှုရှင် ဦးသိန်းယု နှင့် ဒေါ်ချစ်
မွေးနေ့ ကုသိုလ်ပွဲ အလှူ
ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်း ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ရဲ့ မွေးနေ့ကုသိုလ် အလှူကို Haus der Juend frankfurt Deutschherrnefer 12 -60594 Frankfurt ခန်းမမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါ တယ်။ နံနက် ၁၁း၃၀ နာရီမှာ နေ့ဆွမ်းနှင့် အချိုပွဲများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး မွေးနေ့ပွဲသို့ ကြွရောက်လာ ကြတဲ့ ဧည့်ပရိသတ်များကိုလည်း တည်ခင်းဧည့်ခံ ကျွေးမွေးကြပါတယ်။ ဒီနေ့ မွေးနေ့ပွဲအတွက် ကြွရောက် လာကြတဲ့ ဧည့်ပရိသတ်များကို မွန်အမျိုးသား ကိုမင်းစိန်လင်း မှ မြန်မာထမင်းဟင်းများဖြင့်လည်းကောင်း၊ အသင်းမိသားစုများမှ အချိုပွဲများနှင့်လည်း တည်ခင်းဧည့်ခံ လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီ အချိန်တွင် မွေးနေ့ပွဲ အခမ်းအနား အစီစဉ်ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားတွင် အသင်းအတွင်း ရေးမှူး ဦးသိန်းယု မှ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ အခမ်းအနား အစီအစဉ်အရ နမော တဿ သုံးကြိမ်ရွတ်ဆို၍ အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ငါးပါးသီလဆောက်တည်ခြင်း၊ မင်းကွန်း တိပိဋက ဆရာတော်ကြီး၏ မေတ္တာပို့လင်္ကာများကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်း၊ မေတ္တသုတ် ပရိတ်တရားတော်၊ အနုမောဒနာတရားတော်တို့ကို နာယူခြင်း၊ ဧည့်ပရိသတ်များကိုယ်စား ဦးအောင်အောင် မှ လှူဖွယ်ဝတ္ထုများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းနဲ့ အလှူရှင် ကိုမင်းစိန်လင်းမှ ဆရာတော်နဲ့ တကွ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဧည့်ပရိသတ်များအား တည်ခင်းဧည့်ခံ လှူဒါန်းကြရတဲ့အတွက် အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ ၀ိုင်းဝန်းကူညီ အားပေးကြသူများကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းတို့ကို ပြောကြားကာ လှူဒါန်းမှု အစုစုတို့အတွက် အသင်းအမှုဆောင် ဦးလှစိုးမှ အသင်းမိသားစုများ ကိုယ်စား ရေစက်သွန်းချ အမျှအတန်းများ ပေးဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု သုံးကြိမ်ရွတ်ဆို၍ အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။
အသင်းမိသားစုများနဲ့တကွ ဧည့်ပရိသတ်များအားလုံး ရွှင်လန်းချမ်မြေ့စွာဖြင့် အမျိုးဘာသာ သာသနာ အကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။ (အချို့ပုံများ ကင်မရာထဲ မပါရှိ၍ မတင်ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်)။
ဦးသိန်းယု + ဒေါ်ချစ်ချစ် မိသားစုရဲ့ မွေးနေ့ကိတ် အလှူ
ဆိတ်သားဖတ်အလှူရှင် ဦးမောင်မောင်ဝင်း + မမြစမ်းအေး မိသားစုနဲ့ အမှတ်တရ
မွေးနေ့ပွဲ အလှူရှင် မွန်အမျိုးသား ကိုမင်းစိန်လင်းနဲ့ အမှတ်တရ
ဦးတင်ဖေ + ဒေါ်အုံးမမ၊ မစိမ့်စိမ့်လှိုင်၊ မမြစမ်းအေးတို့နဲ့ အမှတ်တရ
မမြစမ်းအေး၊ မစိမ့်စိမ့်လှိုင်၊ မငယ်၊ မသင်းသင်းဦး၊ ဒေါ်အုံးမမ တို့နဲ့ အမှတ်တရ
အသင်းအမှုဆောင် ဦးလှစိုး၊ ကိုမင်းစိန်လင်း၊ ဒေါ်ခင်သန်းနွယ်တို့နဲ့ အမှတ်တရ
ဒေါ်ခင်ထွေး ၊ ကိုဝင်းကိုရဲ့ သားရတနာနဲ့ အမှတ်တရ
ဦးကြည်ဝင်း + ဒေါ်လင်းလင်းလက် မိသားစုနဲ့ အမှတ်တရ
ကိုစိုးဝင်းသန်း + မတင်တင်ဝင်း မိသားစုနဲ့ အမှတ်တရ
ကိုတိုးအောင်ထွန်း + မအေးအေးကြည်တို့နဲ့ အမှတ်တရ
ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းကြီး၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာ (၃) လပတ် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း
၃၀. ၀၆. ၁၂
၀၂. ၀၇. ၁၂
ကိုလှမောင်သန်း + မစောစန္ဒာလင်း မိသားစု
၀၃. ၀၇. ၁၂
ဦးတင်ဖေ + ဒေါ်အုန်းမမ မိသားစု
၀၄. ၀၇. ၁၂
ကိုစိန်ဝင်း + မမြသီတာအေး
၀၅. ၀၇. ၁၂
ဘောင်ချာစာအုပ် B S R (1)
ဘောင်ချာစာအုပ် B S R (8)
၁၀. ၀၇. ၁၂
၁၆. ၀၇. ၁၂
ဦးလှစိုး + ဒေါ်သိန်းမြင့်စိုး မိသားစု
ကိုတိုးမင်းမြတ်စိုး နှင့် ဇနီး
၁၇. ၀၇. ၁၂
ဦးတိုးအောင်ထွန်း + ဒေါ်အေးအေးကြည် မိသားစု
၁၉. ၀၇. ၁၂
ဦးပညာဝံသ London ခရီးစဉ် လေယာဉ်ခ ပြန်ဝင်
၀၁. ၀၈. ၁၂
၀၂. ၀၈. ၁၂
၀၃. ၀၈. ၁၂
၀၆. ၀၈. ၁၂
၀၈. ၀၈. ၁၂
ဘောင်ချာစာအုပ် B S R (13)
၁၃. ၀၈. ၁၂
ဦးကျော်ကျော် + ဒေါ်သင်းသင်းဦး မိသားစု
၁၄. ၀၈. ၁၂
၁၅. ၀၈. ၁၂
၁၆. ၀၈. ၁၂
၂၁. ၀၈. ၁၂
ဦးကြည်ဝင်း + ဒေါ်လင်းလင်းလက် မိသားစု
၃၁. ၀၈. ၁၂
၀၃. ၀၉. ၁၂
၀၄. ၀၉. ၁၂
၀၅. ၀၉. ၁၂
၀၆. ၀၉. ၁၂
၁၄. ၀၉. ၁၂
ကိုမောင်မောင်ဝင်း + မမြစမ်းအေး မိသားစု
၁၇. ၀၉. ၁၂
ဦးတိုးအောင်ထွန်း + ဒေါ်အေးအေးကြည် မိသားစု
၁၈. ၀၉. ၁၂
၂၅. ၀၉. ၁၂
ဦးပညာဝံသ London ခရီးစရိတ် လေယာဉ်ခ
၂၇. ၀၇. ၁၂
ကျောင်းလစာ (Aug 12) + Mainova
Internet (Aug 12)
၃၀. ၀၇. ၁၂
ဦးပညာဝံသ A O K ဆောင်ခ
Cergiz Gurer ( အခွန်) လုပ်အားခ
အသင်းနောက်ခံ ပန်းချီကား ဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်
ဦးပညာဝံသ အား လစာ (Juli) ထည့်ပေး
၂၀. ၀၈. ၁၂
Laila Basmati တစ်အိတ်ဝယ်
Cergiz Guren (အခွန်) လုပ်အားခ
၂၇. ၀၈. ၁၂
ဦးပညာဝံသ Visa သက်တမ်းတိုးခ
Unitimedia Internet (Juli)
ကျောင်းလစာ + Mainova ဘိုး
Cocacola Pet ၀ယ်
၂၄. ၀၉. ၁၂
၂၈. ၀၉. ၁၂
Zinsen / Kontofuhrung
၃၀. ၀၉. ၂၀၁၂ ရက်နေ့ထိ ကျန်ရှိငွေပေါင်း
မှတ်ချက်။ ။ Konto No. 60 1000 5401 ၌ ၁၉၉၅ ယူရို ရှိပါသည်။
အထက်ဖေါ်ပြပါ ငွေစာရင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး မရှင်းလင်းတာများရှိခဲ့လျှင် ဘဏ္ဍာရေးမှုး ကိုလှမောင် သန်း အားဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ယခုလို ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ တိုးတက်ပြန့်ပွားစေရန် ရည်သန်၍ စေတနာသဒ္ဓါတရား ထက်သန်စွာ ဖြင့် လှူဒါန်းကြသော စေတနာရှင်များအားလုံးအား ဗုဒ္ဓသာသနရံသီအသင်းကြီးမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူး အထူး တင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်း ပိုမိုလှူဒါန်းနိုင်ကြပါစေရန် နိဗ္ဗာန် အကျိုးမြှော်၍ နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
ယခုတင်ပြပေးထားသော စာရင်းများသည် Bank Konto အတွင်းဝင်လာသောအမည် စာရင်းများသာ ဖြစ်ပါသည်။ အလှူခံစာအုပ် (BSR) များတွင် လှူဒါန်းကြသော အလှူရှင်များအမည်မပါရှိတာကို နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးပါခင်ဗျာ။
အလှူရှင်အားလုံး၏ အမည်စာရင်းများအားလုံးကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်အလှူရှင်များ စာရင်းတွင် ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းကြီး၏ ၂၀၁၂ - ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာ (၃) လ
ဦးလှမောင်သန်း + ဒေါ်စောစန္ဒာလင်း
ဦးစိန်ဝင်း + ဒေါ်မြသီတာအေး
ဦးမောင်မောင်ဝင်း + ဒေါ်မြစမ်းအေး
ဦးလှစိုး + ဒေါ်သိန်းမြင့်စိုး
ဦးတိုးအောင်ထွန်း + ဒေါ်အေးအေးကြည်ု
Dimitrios Mito + မတင်မိုးဆက်
ဦးသိန်းယု + ဒေါ်စောခင်ရီ
ဦးကြည်ဝင်း + ဒေါ်လင်းလင်းလက်
ဦးအောင်ကျော်ထွန်း + ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း
ဦးလှ + ဒေါ်ခင်ထွေး
ဦးကြည်လင်း + ဒေါ်သော်တာ
ကိုအောင်အောင် + မစိမ့်စိမ့်လှိုင်
ဦးတင်ထွန်း + ဒေါက်တာဝါ၀ါရွှေ
ကိုစိုးဝင်းသန်း + မတင်တင်ဝင်း
ဦးလှစု + ဒေါ်စိုးစိုးသိန်း
ဦးစိုးမိုးသိန်း + ဒေါ်သဉ္ဇာလွင်
ဦးနေ၀င်းလှိုင် + ဒေါ်မီစံ
ကိုသန်းထွန်းအောင် + မလွင်လွင်စိုး
က်ိုနိုင်ဝင်းဦး နှင့် ဇနီး မိသားစု
ဦးတင်ဖေ + ဒေါ်အုန်းမမ မိသားစု
Drဦးကျော်ကျော် + Dr ဒေါ်သင်းသင်းဦး
ကိုသိန်းဇော် + မမြိုင်
ကိုဇော်မိုးဦးနှင့်ဇနီး Dai (USA)၊ မအေးနန္ဒာတင်ဖေ (USA)